Kooxaha u soo baxay UCL, kuwa Europa League aadaya, abaal-marinnada shaqsiyadeed & Wax waliba oo aad uga baahan tahay horyaalka La Liga ee xalay la soo gabagabeeyey – Gool FM
(Madrid) 20 Luulyo 2020. Horyaalka La Liga xilli ciyaareedkiisa 2019/20 ayaa xalay la soo gabagabeeyey, waxaana idinla wadaagi doonaa kooxda u soo baxay ka qeyb-galka UEFA Champions League, kooxaha aadaya Europa League iyo abaal-marinnada shaqsiyadeed ee lagu kala guuleystay.
Kooxda uu hoggaamiyo Tababare Zinedine Zidane ee Real Madrid ayaa kal ciyaareedkan hanatay horyaalka La Liga, waxaana uu ahaa horyaalkoodii 34-aad ee ay ku guuleystaan Taariikhdooda.
Los Blancos oo horyaalka hanatay waxaa ka qeyb-galka Champions League kal ciyaareedka dambe kula biiraya Kooxaha Barcelona, Atletico Madrid iyo Sevilla.
Kooxaha Villarreal, Real Sociedad iyo Granada ayaa ka ciyaari doona tartanka Europa League xilli ciyaareedka soo socda kaddib markii ay kala sarreynta horyaalka ku kala dhammaysteen kaalimaha shanaad, lixaad iyo todobaad sida ay u kala horreeyaan.
Saddexda kaalin ee ugu hooseeya horyaalka waxaa ku dhammaystay kooxaha Espanyol, Real Mallorca iyo Leganes kuwaasoo ka dhacay horyaalka, isla markaana dib ugu laabtay horyaalka heerka labaad ee Spain, LaLiga SmartBank.
Abaal-marinnada shaqsiga ah haddii aan eegno Lionel Messi ayaa xilli ciyaareedkan ku dhammaystay isagoo ah gooldhaliyaha ugu sarreeya La Liga, waxaana uu abaal-marinta Pichichi Trophy ku qaaday 25 gool, isagoo afar gool oo nadiif ah ka sarreeyey Karim Benzema oo kaalinta labaad ku dhammaystay.
Dhinaca kale abaal-marinta Zarra Trophy oo la siiyo gooldhaliyaha ugu sarreeya xiddigaha Spain ee horyaalka La Liga Santander, waxaa ku guuleystay Gerard Moreno.
Weeraryahanka Villarreal ayaa ku dhammaystay halka ugu sarreysa gooldhalinta xiddigaha Spain ee ka ciyaara horyaalka La Liga kaddib markii uu dhaliyey 18 gool, waxaana uu ku garaacay Raul Garcia oo 15 gool dhaliyey iyo Iago Aspas oo 14 gool saxiixay.
Goolhaye Thibaut Courtois ayaa ku guuleystay Zamora Trophy markiisii saddexaad ee xirfaddiisa ciyaareed, waxaana uu labo ka mid ah abaal-marintan ku qaaday Real Madrid, halka mid kale uu ku soo qaaday Atletico Madrid.
Waxa uu Courtois ku dhammaystay meel ka sarreystay goolhayeyaasha kale ee Jan Oblak iyo Unai Simon, waxaana uu sidaas ku qaatay abaal-marinta goolhayaha ugu fiican horyaalka.
Zinedine Zidane iyo Julen Lopetegui ayaa ah musharraxiinta ugu sarreeya ee abaal-marinta Miguel Munoz, taasoo la siiyo macallinka ugu wanaagsan horyaalka.
Tababaraha Osasuna ee Jagoba Arrasate, kan Real Sociedad ee Imanol Alguacil iyo midka Granada ee Diego Martinez ayaa sidoo kale ka mid ah musharraxiinta abaal-marintan Miguel Munoz.
Lionel Messi oo ka sare maray Xavi Hernandez rikoor cusubna ka dhigay horyaalka La Ligaha Spain